ဗြိတိသျှကောင်စီမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသစ်များကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ - Myanmar Network
ဗြိတိသျှကောင်စီမှ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသစ်များကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၉) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Posted by Ummay Ayman on February 28, 2013 at 15:28 in ပညာရေး အခွင့်အလမ်းများ
ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲများကို ဧပြီလ (၂၂)၊ (၂၃)၊ (၂၄) နှင့် (၂၅) ရက်နေ့တို့တွင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်သဖြင့် (အသက် ၇ နှစ်နှင့် အထက် မည်သူမဆို) တက်ရောက်လိုသူများ လာရောက်ဖြေဆိုနိုင်ပါသည်။
ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲကြေးမှာ မြန်မာငွေ တစ်သောင်းကျပ်ဖြစ်ပြီး မှတ်ပုံတင်ကဒ်ပြား (သို့မဟုတ်) သန်းခါင်စာရင်း/မွေးစာရင်း မူရင်းဖြင့် ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲဖြေရန် မတ်လ (၄) ရက်နေ့ မှစ၍ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ ညနေ (၅:၃ဝ) အတွင်းလာရောက် စာရင်းသွင်းနိုင်ပါပြီ။
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက British Council Customer Service & Sales Department ဖုန်းနံပါတ် ၂၅၆၂၉ဝ ၊ ၂၅၆၂၉၁ (လိုင်းခွဲ - ၃၃၂၅, ၃၃၂၆, ၃၃၁၇) သို့ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ နံနက် (၈:၃ဝ) မှ ညနေ (၆:၃ဝ) အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်နိုင်ပြီ enquiries@mm.britishcouncil.orgသို့လည်း အီးမေးလ်ပို့၍ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Placement Test Timetable for April 2013 Classes ( 29th April to 8th July 2013)
Note to all members: We won't be accepting any placement test fee on 18th, 19th and 20th March. We will start accepting the placement test fee again from 21st March (from Monday to Friday, 8:30 am to 5:30 pm.)
မတ်လ ၁၈၊ ၁၉ နှင့် ၂ဝ ရက်နေ့များတွင် ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲကြေးများအား လက်ခံမည်မဟုတ်ပါ။ မတ်လ (၂၁) ရက်နေ့ ကြာသာပတေးနေ့မှ စ၍ ပုံမှန်အတိုင်း တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့ နံနက် (၈း၃ဝ) မှ ညနေ (၅:၃ဝ) အထိ လက်ခံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Permalink Reply by Yi Lin on April 20, 2013 at 22:30
is information for mandalay or yangon
Permalink Reply by Ummay Ayman on May 7, 2013 at 15:01
For Mandalay Information, please contact Mandalay British Council at the following address;
Building 6/7, SY Compound
30th Street (between 77th and 78th)
Telephone + 95233904, Ext: 801